के तपाईलाई थाहा छ ! मदिराको उचित मात्रा कति हाे ? - नेपालबहस
शनिबार , बैसाख ११, २०७८
के तपाईलाई थाहा छ ! मदिराको उचित मात्रा कति हाे ?
| २१:०५:०७ मा प्रकाशित
२९ बैशाख, काठमाडौं । विश्वभर कोरोना भाइरसले महामारी लिइरहेको बेला नेपाल सरकारले लकडाउन जारी गरेको छ । बन्दाबन्दीमा दिन कटाउनै गाह्रो । दिनभर के गर्दै बस्ने ? कतिपयका लागि बहाना बनेको छ, मदिरा पिउने । हुन त अहिले मदिरा त्यति सहजै उपलब्ध छैन । तेसो त बयस्कलाई मदिराबाट छुटाउने मौका पनि हो यो लकडाउन ।
कतिले त मदिरा छाडे पनि होलान् । तर, सबैको हकमा त्यस्तो नहोला । घरमै बस्न पाइने भएकाले वा कामकाजका लागि बाहिर निस्कनु नपर्ने भएकाले कतिपयलाई मदिरा पिउने बहाना मिलेको छ । मदिरा पिउनेहरू अनभिज्ञ हुँदैनन् कि यो स्वास्थ्यका लागि हानीकारक छ । स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन, परिवार, बालबच्चा सबैका लागि हानीकारक छ ।
त्यसैले सम्भव भएसम्म त मदिरा त्यागेकै उत्तम हुन्छ । मदिरा पिउने नै हो भने दैनिक कति पिउने ? यो कुरा तपाईको स्वास्थ्यमा पनि निर्भर रहन्छ । स्वस्थ्य एवं तन्दुरुस्त व्यक्ति र रोगी व्यक्तिका लागि मदिराको मात्रा एकनास हुँदैन । स्वास्थ्यमा कुनै समस्या भएका व्यक्तिहरूका लागि थोरै मात्रामा पिइने मदिरा पनि निकै हानीकारक हुन सक्छ ।
मदिरा कति पिउने ?
स्वास्थ्य विज्ञहरूको यसमा एउटै राय छ, जति मदिरा पिए पनि शरीरलाई हानि गर्छ । अर्थात् उचित मात्रामा पिउँदैमा शरीरलाई हानि हुँदैन भन्ने होइन । थोरै मदिरा सेवन गर्दा पनि त्यसको नकारात्मक असर शरीरमा पर्छ। खासगरी कलेजोको लागि मदिरा अत्यन्तै घातक हुन्छ । तर, थोरै मदिरा पिउँदा पनि स्वास्थ्यमा हानी गर्छ भनेर त्यसको मात्रा बढाउनु अरू घातक हुन्छ । मदिराको मात्रा जति बढाउँदै लान्छौं, खतराको स्थिति पनि उति नै बढेर जान्छ । यद्यपि पिउने नै भएपछि त्यसबाट धेरै क्षति व्यहोर्नु नपरोस् भनेर मात्रा निर्धारण गरिएको छ ।
जान्ने पर्ने उपयोगी कुरा के हो ?
यदि मदिरा पिउने नै हो भने मदिरा पिउनुअघि भरपेट पानी वा तरल पदार्थ पिउनुहोस् । यसले गर्दा मदिराको सोझो असर कम पर्छ । पानी पिएर मदिरा सेवन गरेपछि पेट खराब हुने वा ह्याङओभर हुने समस्या रहँदैन । धेरैले भन्छन् मदिरासँग स्न्याक्स सेवन गर्नुपर्छ । स्न्याक्सको रुपमा मासुजन्य परिकार, भुजिया, चिप्स आदि हुनेगर्छ । यस किसिमको स्न्यान्ससँग मदिरा पिउनु अरू हानिकारक हुन्छ । बरु सलाद वा फलफूलसँग सेवन गर्दा उचित हुन्छ ।
आज काठमाडौंमा ९४० संक्रमित थपिए ७ घण्टा पहिले
चितवनमा कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु १४ घण्टा पहिले
भारतमा संक्रमणमा दैनिक नयाँ रेकर्ड, दिल्लीमा मात्रै १३ हजारको मृत्यु १७ घण्टा पहिले
नवलपुरको बुलिङटारमा जीप दुर्घटना: एकको मृत्यु, १६ घाइते ३ घण्टा पहिले
भूकम्पको छ वर्षमा बन्यो धरहरा, शनिबार ओलीले उदघाटन गर्ने ५ घण्टा पहिले
डोटीमा सडक खन्दा ढुङ्गा लागेर एकको मृत्यु ७ घण्टा पहिले
वैशाख मसान्तसम्म पाथीभरामा पूजापाठ गर्न रोक ७ घण्टा पहिले
सुर्तिजन्य उद्योगसँग सहकार्य नगर्न अपिल ७ घण्टा पहिले
कोरोनाबाट फुङ्गलिङ नगर सभापति गुरुङको निधन ७ घण्टा पहिले
डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स र एनसीएचएलबीच सम्झौता १० घण्टा पहिले
सङ्घीयताले छुन नसकेको इखेनी गाउँ ७ घण्टा पहिले
कोभिड खोप लगाएका र पहिले पनि संक्रमण देखिएका वीर अस्पतालका १५ स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित १३ घण्टा पहिले
झापाको गौरादहमा खाद्य बैकको वृहत कृषि परियोजनाको सुभारम्भ ८ घण्टा पहिले
वेटरदेखि होटल मालिकसम्म बनेका कृष्ण १४ घण्टा पहिले
ओलीलाई बामदेवको जवाफ,म तपाईंसँग आउन सक्दिन १७ घण्टा पहिले
बर्दियामा क्रियाशील सदस्यताको विवाद, पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी ७ घण्टा पहिले
आज राति नेपाली आकाशमा उल्का वर्षा देखिने २ दिन पहिले
पर्यटकले भरिभराउ बनेको कुश्माबजार ३ दिन पहिले
किसानलाई आधुनिक बैंकिङमा लैजाँदै मेगा बैंक १ दिन पहिले
लागु औषध सेवन गरी झगडा गर्ने ५ पक्राउ ६ दिन पहिले
चितवनमा ध्रुबेको आक्रमणबाट पाँच जना घाइते ३ हप्ता पहिले
यूरोप–अमेरिकाभन्दा नर्भिक अस्पतालमा मुटु रोगको उपचार राम्रो २ हप्ता पहिले
यस्ता छन्, मन्‍त्रिपरिषदका निर्णय २ हप्ता पहिले
कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा सहमतिबाटै हुन्छ: प्रचण्ड २ हप्ता पहिले
प्रभु क्यापिटलले दियो एमबिएका विद्यार्थीलाई शेयर बजार सम्बन्धी प्राविधिक विश्लेषण तालिम ३ हप्ता पहिले
अर्घाखाँचीमा असिनाले चुटेर बालकको मृत्यु १ वर्ष पहिले
घुस लिएको र शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रको अभियोगमा मुद्दा दायर १ वर्ष पहिले
मुहार फेरिएको कर्णाली स्कूल २ वर्ष पहिले
उपभोक्ताको घरमा स्मार्ट मिटर जडानका लागि सर्वेक्षण शुरु २ वर्ष पहिले